एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २१ फागुन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २१ फागुन २०७५)
on: March 05, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
एनएलजी इन्स्योरेन्स स्तरीय सेवाका कारण बीमितको विश्वास प्राप्त गर्न सफल कम्पनी मानिन्छ । कम्पनीको बीमा व्यवसाय निरन्तर बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप मुनाफा बढेर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन कम्पनी सफल छ । आगामी दिनमा सबै क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै जाने योजना कम्पनीको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ८ करोड ४५ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो । दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६४ करोड छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पु¥याउनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन छ । यसका लागि कम्पनीले अझै रू. ३५ करोड ९५ लाख जुटाउनुपर्नेछ । अपुग रकम बोनस शेयर जारी गरेर पु¥याउनुपर्नेछ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १६ करोड ४२ लाख छुट्याएको छ । बीमाकोषको रकम २० प्रतिशत बढेर रू. ७४ करोड ९७ लाख पुगेको छ भने महाविपत्ति कोषमा रू. ५ करोड ४६ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीको आव २०७५/७६ र आव २०७४/७५ को दोस्रोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना :
पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ८३ करोड ७३ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७३ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । जारी बीमालेखको संख्या ९५ हजार ८ सय २५ छ भने नवीकरण गरिएको बीमालेखको संख्या १६ हजार १ सय ४८ छ ।
दोस्रो त्रैमासमा रू. १६ करोड ९६ लाख आम्दानी गर्दा रू. ८ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ । पुनर्बीमा कमिशनबाट रू. १२ करोड ४० लाख आम्दानी गरेको छ । दीर्घकालीन लगानी रू. ४७ करोड ८३ लाख छ ।
२ हजार ४ सय ८१ जनालाई रू. ४५ करोड २३ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने २ हजार ३ सय ८० जनालाई रू. ७४ करोड ७४ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ३९, मूल्य आम्दानी अनुपात ३२ दशमलव ४०, तरलता अनुपात १ दशमलव ८४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ५१ दशमलव २५ छ । आइतवारको शेयरमूल्य रू. ७ सय ८१ कायम भएको छ ।
डिभिडेन्ड यिल्ड रेशियो : ३.२० प्रतिशत
अर्निङ पावर रेशियो : ०.००५ गुणा
अर्निङ यिल्ड रेशियो : ३.३७ प्रतिशत
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा १ हजार १ सय ४० कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो भने ५ सय ३६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
कम्पनीको ६४ दिनको कारोबारलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा अन्तिम दिनमा कालो मारुबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ४१ दशमलव ४० विन्दुमा छ । यसले खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १० दशमलव ३२ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुने भएकाले प्रतिफल पनि कम रहन्छ । कम्पनीकोे मुभिङ एभरेज हेर्दा २६ दिने र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुवै औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । पछिल्लो शेयरमूल्य रू. ७ सय ८१ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ८ सय मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ भने सस्तिएमा रू. ७ सय ७१ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको मङ्गलवार विशेष साधारण सभा, प्रस्तावहरु के के ?